Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): February 2010
BURMA VJ Sumla hkrung
at 2/28/2010 07:06:00 PM
Movie vj 2
Movie vj 3
Movie vj 4
Movie vj 5
at 2/28/2010 06:59:00 PM
BBC shiga : Burma's Kachin army prepares for civil war
at 2/23/2010 09:09:00 AM
By Alastair Leithead BBC News, Laiza, northern Burma
Who is first KDO-KRC founder?Who is first KDO-KRC President?
at 2/21/2010 08:03:00 PM
Sumla-picture link ndai kaw dip u
Now in Canada and Demark,
If you wan to know more?
hugawng@gmail.com Email me
Malaysia mungdan Kuala Lumpur mare kaw "Taxi" jawn na rai yang sadi ra na lam ni
at 2/21/2010 09:10:00 AM
1. TAXI kata de rai n-shang shi yang, shawng nnan mawdaw numbat (number plate) hpe galoi mung yu matsing da u.
2. TAXI shagu hta ka mara tawn da ra ai TAXI gawt ai waamying, mawdaw numbat, hkringdat (Driver’s ID) ni hpe galoi mung shawng yu matsing la da u.
3. Kaning re ai masa lam ni hta mi rai rai, TAXI gawt ai wa hku nna kaga hkrun lam hkawm masha (passenger) langai mi hpe bai nmai kahtap htaw la shangun ai. Lama wa TAXI gawt ai masha ni dai zawn galaw wa ai rai yang, hkrat ang ai hte hpe jaw kau nna yu mat na hku di u.
4. Mai byin ai rai yang, tinang shingtai hkrai TAXI jahkring jawn ai lam hpe koi yen u.
5. Bungli aten (office hours)ahpang hkanerai yang, grau nna sadi maja let hkawm sa u.
04 January 2010 shana de 6:45 pm grup-yin hta num kasha langai mi ‘Wangsa Maju LRT Station’ kaw nna shi nga ai nta de wa na matu TAXI jahkring jawn ai.
more+++ndai kaw dip u+++
2010 KRC Malaysia hpe woi awn sawa na ning baw ni
at 2/19/2010 08:48:00 AM
htung hking ka manawt
Email kaw na laika (Educational Purposes Only)
at 2/17/2010 07:18:00 PM
An hte Jinghpaw wunpawng myusha ni mung online computer internet lang ai munmyi jan maga de re wa sai hpe mu lu ai.Lagut lagu ladat sharin ya ai gaw nre.Masha ni an hte hpe ndai zawn re hpaji ni hte galaw nga sai lam htawng madun mayu ai lam sha re.
hpaji kung ai nkau chyawm gaw chye dik rai na sai.ngai hugawng zawn re hpa nchye shi ai niamatu re.
post by http://myanmarslection.ning.com/forum/topics/hacking-information
ပြည့်စုံသော HACKING Information
အခြား အခြားသော forumတွေ၊ websiteတွေမှာ "Email ကို ကျနော်တို့ ဘယ်လို hack နိုင်သလဲ? ခင်ဗျားကျနော့်အတွက် hack ပေးနိုင်မလား ? ဆိုပြီး
သန်းပေါင်းများစွာသောလူတွေ မေးနေကြတာကို သတိပြုမိကြမယ် ထင်ပါတယ်။
ဒီ့အတွက်ကြောင့် ဒီ post ဖြစ်လာရတာဖြစ်ပြီး သင့်အတွက် hacking နဲ့
ဆိုင်တဲ့ အခြေခံအတွေးအခေါ်လေးတွေကို ဖော်ပြထားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေကို
ဘယ်လိုဆင့်ပွားပြီး အသုံးချရမယ်ဆိုတာကတော့ သင် ကိုယ့်ကိုကိုယ်
Hack တဲ့ နည်းလမ်းတွေကို Windows 98 ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ပြီးကတည်းက
စတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Hacking ဆိုတာ အခြေခံအားဖြင့်တော့ ပျော့ကွက် ဟာကွက်
ကွင်းဆက်တွေကို ရှာဖွေပြီး ၄င်းတို့ထဲကမှာ အချို့ယိုစိမ့်နိုင်တဲ့
holeတွေကနေ information တွေထွက်လာအောင် ကြိုးစားတာဖြစ်ပြီး သင့်အတွက်
အရေးပါနိုင်တဲ့ Passwordများ၊ Credit Card နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့
အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ရယူချင် ရယူနိုင်ပါတယ်။ တခါတရံမှာတော့
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက် အသုံးပြုကြပါတယ်။
ကျနော် အကြံပေးချင်တာကတော့ ကောင်းမွန်တဲ့ Site တွေကနေ ဆောင်းပါးတွေ၊
ပို့ချချက်တွေကို သေချာဖတ်ရှုလေ့လာဖို့လိုပါတယ်။ ဒါဟာ သင့်အတွက် Hacking
ကို လေ့လာခြင်းမှာ တစ်ခုတည်းသော နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
အဓိကကျတဲ့ အချက်တွေ ကိုပဲ ဖော်ပြပြီး hacking နည်းလမ်း အချို့ ကို အကျဉ်းချုပ်
ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Hacking မှာ အခြေခံအားဖြင့် အဓိကကျတဲ့ အပိုင်း
နှစ်ပိုင်းအနေနဲ့ ကွဲထွက်နေပါတယ်။ အဲဒါကတော့...
၁။ Email (သို့) User information
၂။ Web based hacking တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Email (သို့) User information
ယနေ့အချိန်ကာလများမှာ အများဆုံးအသုံးပြုနေကျဖြစ်တဲ့ ၊ Email, Passwords, Credit Card details
စတဲ့ user information များကို hack တဲ့အခါ ကျော်ကြားနေတဲ့
( ခ ) Brute Forcing
( ဂ ) Keylogging
Phishing ဆိုတာကတော့ ပုံမှန်အားဖြင့် ထူးခြားတဲ့ တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
hacker တွေက အချို့ website (သို့) gmail နဲ့ လုံးဝနီးပါးဆင်တူတဲ့ page
တစ်ခုကို ဖန်တီးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ page တွေကို hacker တွေက
သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် server တွေမှာ upload လုပ်ကြပါတယ်။ အဲဒီနောက် user
အသစ်တွေဆီကို အဲဒီ link တွေပေးပို့ပါတယ်။ user တွေက အဲဒီ link
ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့ အခါ user တွေ အနေနဲ့ သူတို့ ရောက်ချင်တဲ့ website (သို့)
gmail လို့ထင်ပြီး သူတို့ရဲ့ username နဲ့ password တွေကို ရိုက်ထည့်ပြီး
sign in (သို့) submit ကို click လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ အဲဒီ user ရဲ့
information တွေကို hacker ကရရှိသွားပါပြီ။ ဒီနည်းလမ်းကို hacking
လောကထဲကို ၀င်ရောက်ဖို့ကြိုးစားနေကြတဲ့ လူသစ်တွေ
ဒီနည်းလမ်းရဲ့ ပြုလုပ်ပုံအဆင့်ဆင့်ကို Simple Hacking ( Fake Login ပြုလုပ်ခြင်း) ဆိုတဲ့ post ကို ဒီ ဆိုဒ်တစ်နေ့ရာမှာတင်ပေးပါမယ်။
ဒီနည်းလမ်းကို အသုံးပြုပြီး အိန္ဒိယမှာ ရှိတဲ့ ICICI bank နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဖြစ်ခဲ့တဲ့ သာဓက
တစ်ခုရှိပါတယ်။ များစွာသော user info တွေကို ဒီနည်းလမ်းကို အသုံးပြုပြီး
လူတော်တော်များများက ဒီနည်းလမ်းကို အသုံးပြုဖို့ကြိုးစားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီနည်းလမ်းမှာ
အားနည်းချက်တစ်ခုရှိနေပါတယ် အဲဒါကတော့ သားကောင်ဟာ internet နဲ့ပတ်သတ်ပြီး
ဗဟုသုတ အနည်းငယ်ရှိရုံနဲ့ ဒီ page ဟာ အစစ်မဟုတ်မှန်းသိနိုင်ပါတယ်...
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူက URL ကို ဖတ်ကြည့်မယ် ဒါဆိုရင် မူရင်း website
Brute Forcer ဆိုတာကတော့ အခြေခံအားဖြင့် cracker လို့ခေါ်ဆိုနိုင်တဲ့ program
တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ Brute Forcer ထဲမှာသင်က သင် hack ချင်တဲ့ username
ကို ထည့်သွင်းရပါမယ်...ပြီးတော့ notepad file တစ်ခုကိုလည်း password
တစ်ခုကဲ့သို့ထည့်သွင်းရမှာဖြစ်ပြီး အဲဒီ notepad ထဲမှာ ရှိသမျှ
အားလုံးနီးပါး အင်္ဂလိပ်ဘာသာစာလုံးတွေ ပါရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ၄င်းက
ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲဆိုတော့ password မှာပါတဲ့ စာလုံးတစ်လုံးစီတိုင်းအတွက်
notepad file ထဲမှာ ရှိသမျှ စာလုံးတိုင်းနဲ့ တိုက်ကြည့်ပါတယ်။
အားလုံးတူညီသွားပြီ ဆိုရင်တော့ ပွဲသိမ်းပဲပေါ့...။ တခြား forum တွေမှာ " huge pass list"
ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ကို သတိပြုမိချင်ပြုမိပါလိမ့်မယ်။ ၄င်းတို့က
ဘာမှတော့မဟုတ်ပါဘူး...ဒါပေမယ့် သင့်ရဲ့ bruteforcer ထဲကို ထည့်သွင်းဖို့ password list ဖြစ်ပါတယ်။
၁။ တခါတရံမှာ brute forcing ဟာ အချိန်အလွန်ကြာမြင့်တတ်ပါတယ်။
၂။ ၄င်းဟာ အာမခံချက် မရှိပါဘူး
၃။ ယနေ့အချိန်ကာလမှာဆိုရင် လူတော်တော်များများဟာ alpha-numeric-symbol
password တွေရှိနေကြပါပြီ။ bruteforcer အတွက် ၄င်းတို့က detect လုပ်ဖို့
၄။ ကျော်ကြားတဲ့ gmail ကဲ့သို့သော site တွေမှာ ပြုလုပ်ထားတဲ့ ဒီဇိုင်းတစ်ခုကတော့ loginုလုပ်တဲ့အခါ ၃ ခါထက်ကျော်ပြီး
မှားယွင်းနေပြီးဆိုရင် ၄င်းတို့ က "image captcha" ကိုထည့်လိုက်တဲ့အတွက်
bruteforcer ကို ရပ်သွားစေပါတယ်။
Keylogger ကတော့ "server" လို့ ခေါ်ဆိုနိုင်တဲ့ file သေးသေးလေးတွေကို ဖန်တီးဖို့အတွက်
သင့်ကို ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။ သင်က သင့်ရဲ့ server ကို သားကောင် ဆီသို့
ပေးပို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ သားကောင်က အဲဒီအပေါ်မှာ click လိုက်ရင်တော့
ဒီနည်းလမ်းဟာ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို hack ဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခု ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Keylogger ဆိုတာကတော့
သင့်သားကောင်ရဲ့ computer ထဲမှာ သူဟာသူ install လုပ်နိုင်တဲ့ program
တစ်ခုဖြစ်ပြီး သင့်သားကောင်က သူ့ရဲ့ keyboard ပေါ်မှာ ရိုက်လိုက်သမျှ
keystrokeတိုင်းကို မှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။ ပြီးရင် ၄င်းက မှတ်တမ်းတင်လို့
ရသမျှတွေကို hacker ဆီသို့ပေးပို့ပါတယ်။ keystroke ( ဆိုလိုတာက FTP, Email
, Messengers ) ကို လက်ခံရရှိဖို့ အများကြီးလမ်းရှိပါတယ်။
ကျနော့်အနေနဲ့ပြောရရင် ဒီနည်းလမ်းဟာ သင့်ရဲ့ သားကောင်ကို လှည့်စားပြီး
သူတို့ရဲ့ information တွေကို ရယူဖို့အတွက်
အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ( Keylogger Collection )
၁။ သင့်ရဲ့ သားကောင်က keylogger ကိုလက်ခံရရှိတဲ့ အခါ သူတို့ရဲ့ antivirus
တွေက keylogger ကို အလိုအလျှောက် delete လုပ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် သင်အနေနဲ့ တစ်စုံတစ်ရာ လှည့်ဖြားခြင်းအားဖြင့် antivirus ကို
disable လုပ်ဖို့ စည်းရုံးသိမ်းသွင်းရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂။ တခါတရံမှာ keylogတွေကို ပေးပို့နေတဲ့အချိန်မှာ firewall က block လုပ်လိုက်ခြင်းများပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Trojan တွေကတော့ keyloggerတွေရဲ့ ဖခင် နဲ့တူပါတယ်။ Trojan တွေက အပေါ်မှာ
ဖော်ပြခဲ့တဲ့ keylogger တွေအတိုင်းပဲ သင့်ဆီကို keylog တွေ ပေးပို့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ၄င်းတို့က သင့်သားကောင်းရဲ့ computer ကို သင် ထိန်းချုပ်မှု
ရစေပါတယ်။ သင့်သားကောင်ရဲ့ computer မှာ သင့်စိတ်ကြိုက် fileတွေကို Edit /
delete/ upload/ download လုပ်နိုင်ပါတယ်။ Trojan တွေမှာ keyboard ကို
ကောင်းကောင်း အလုပ်မလုပ်အောင် ( keyboard မှာ ကိုယ်နှိပ်လိုက်တဲ့ စာလုံးက
တစ်ခု ပေါ်နေတာက တစ်ခု ပေါ်ချင်တဲ့ စာလုံးလျှောက်ပေါ်နေတာ၊ တခါတလေ keys
တွေကို ရိုက်လို့ရတဲ့ အခါ ရတယ် မရတဲ့ အခါလည်း မရဘူး အဲလိုမျိုးတွေပေါ့ )၊
CD ROM တွေ Eject လုပ်တဲ့ အခါ ထွက်မလာတာ ၊ CD ပြန်ထည့်ပေးဖို့အတွက်
တောင်းဆိုတာ စသဖြင့် အခြား အခြားသော feature တွေလည်း ပါဝင်ပါသေးတယ်။ ( Trojan Toolများ )
keylogger တွေနဲ့ အတူတူပါပဲ။
အကြံပြုချက် - keylogger မှာ အကြုံပြုခဲ့သလိုပါပဲ crypter တွေသုံးပါ။
ကျနော်က ဘယ် website မဆို hack ဖို့အတွက် hacker တွေကို အကူအညီပေးနိုင်တဲ့
အသုံးပြုမှုအများဆုံးဖြစ်တဲ့ web hacking နည်းပညာ အချို့ ကို
ဆွေးနွေးပေးသွားပါမယ်။ တဘက်ကကြည့်ရင်လည်း ဒါဟာ သင် site ကို
( ခ ) XSS
( ဂ) Shells
( င ) နောက်ထပ်အများကြီး ရှိပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီမှာတော့ အသုံးပြုမှုအများဆုံးဖြစ်တာကိုပဲ ဆွေးနွေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(က) SQL Injection
ယနေ့အချိန်အခါမှာ website အများစုဟာ SQL Database တစ်ခုနဲ့ connect လုပ်ထားကြပါတယ်။ SQL
Databaseက သူတို့ရဲ့ website သို့ လာရောက်လာပတ်သူက register
လုပ်သွားတဲ့အခါ username နဲ့ password တွေ ( encrypt လုပ်ပြီး )ကို
သိမ်းဆည်းထားဖို့အတွက် သူတို့ကို ကူညီပါတယ်။ SQL database က user တစ်ယောက်
logs in လုပ်တဲ့ အခါတိုင်းမှာ မေးခွန်းတွေမေးမြန်းတဲ့ အလုပ်ငန်းစဉ်ကို
လုပ်ဆောင်ပါတယ်။ ၄င်းတို့ database ဆီသွားပြီး မှန်ကန်သေချာတဲ့ password
ဟုတ်မဟုတ် ကြည့်ပါတယ်။ အကယ်၍ မှန်ကန်တယ်ဆိုရင်တော့ user ကို log in
လိုက်ပါတယ်၊ မမှန်ဘူးဆိုရင်တော့ error တစ်ခုကို ပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်
အခြေခံဆောင်ရွက်ချက်ကတော့ database မှာရှိတဲ့ internet information ကို
အသုံးချဖို့ကြိုးစားပြီး database ထဲမှာရှိတဲ့ database ထဲမှာ
မေးခွန်းတစ်ခုကို စစ်ဆေးဖို့ command တစ်ခုကို
လိုက်နာဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဒီ post
ထဲမှာ ထည့်သွင့်ဖို့ဆိုတာ တကယ့်ကို မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့
ဒီနည်းလမ်းဟာ website ကို hack ဖို့အတွက် နည်းလမ်းတွေထဲမှာ အရှုပ်ထွေး
သင့်ရဲ့ website မှာ RFI attach လုပ်ဖို့ အားနည်းချက်ရှိလား မရှိလားဆိုတာကို သိချင်ရင် အောက်ပါအတိုင်းပြုလုပ်ပါ...
အကယ်၍ သင့် site ရဲ့ URL က....
ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် ၄င်းရဲ့ အဆုံးမှာ ( ' ) ကို အောက်မှာ ပြထားသလိုမျိုး ပေါင်းထည့်ပေးပါ...
XSS ကတော့ အချို့ website တွေကို hack ဖို့အတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ အချို့ website/ forum တွေက post (
သို့ ) ဆောင်းပါး တွေထဲမှာ HTML ခွင့်ပြုခဲ့မယ်ဆိုရင် hacker က content
ထဲကို အန္တရာယ်ရှိတဲ့ script တွေကို post လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်
ဘယ်အချိန်မဆို user တစ်ယောက်က page ကိုဖွင့်လိုက်တိုင်း cookieတွေက hacker
ဆီကိုပေးပို့ပါလိမ့်မယ်။ ဒီအတွက် သူက user ကဲ့သို့ log in လုပ်နိုင်ပြီး
website ကို #$%@# လုပ်ပါတော့တယ်။
( ဂ ) Shells
Shell ဆိုတာကတော့ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ .php script ဖြစ်ပါတယ်။ ၄င်းကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ဆိုတော့ avaters, recepie, tricks , feedbacks ကဲ့သို့သော ဘယ်ဖိုင်မဆို upload လုပ်နိုင်တဲ့
website တစ်ခုခုမှာ နေရာ တစ်ခု ရှာပါ။ ပြီးရင် သင့်ရဲ့ shell file ကို
အဲဒီထဲကို upload လုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားပါ။ upload ပြီးသွားရင် ၄င်းကို
URL bar မှာဖွင့်ပါ။ အဲဒီ webhosting ရဲ့ FTP account တစ်ခုလုံးကို သင်
မြင်ရပါလိမ့်မယ်။ index page ထဲမှာပါဝင်သမျှကို သင့်စိတ်ကြိုက်
အခုလိုပြုလုပ်ခြင်းကို deface လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။
RFI ကလည်း website တစ်ခုကို deface လုပ်ဖို့အတွက် ကောင်းတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုပဲ
ဖြစ်ပါတယ်။ ၄င်းကို shell နဲ့အတူအသုံးပြုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၄င်းကို သင့်ရဲ့
shell ပေါ်မှာ upload လုပ်ပြီးပြီး ဆိုရင် သင့်ကိုအထောက်အကူပေးပါလိမ့်မယ်...
သင်က RFT သို့ အားနည်းချက်ရှိတဲ့ site တစ်ခုကို ရှာတွေ့ရပါမယ်... အဲဒီနောက် အောက်မှာပြထားတဲ့ အတိုင်း ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်...
ဒီဟာက သင့်ကို သင့်သားကောင်ရဲ့ sites FTP ၀င်လမ်း ကို ထပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ shell မှာလိုပဲ သင်ကြိုက်သလို သင့်စိတ်ကြိုက် လုပ်လို့ရပါပြီ။
အကယ်၍ သင်က သင့် website က RFI attach လုပ်ဖို့ အားနည်းချက် ရှိလား မရှိဘူးလားဆိုတာကို စစ်ဆေးချင်ရင် အောက်ပါအတိုင်း လုပ်ပါ...
အကယ်၍ သင့် site ရဲ့ URL က
ဖြစ်နေခဲ့ရင် ၄င်းရဲ့ အဆုံးမှာ အောက်မှာပြထားတဲ့ အတိုင်း ပေါင်းထည့်ပေးပါ...
အကယ်၍ သင့် page ထဲမှာ google page ပါဝင်နေမယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒီအဓိပ္ပာယ်က RFI သို့ တွဲဆက်ခြင်းမှာ ပျော့ကွက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Hugawng Grai ra ai Myen mungasumla hkrung ning hkringasharin ga (Change)
at 2/14/2010 03:51:00 PM
Click Part (2) Kyaw Hein
Click Part (3) Kyaw Hein
Click Part (4) Kyaw Hein
Click Part (5) Kyaw Hein
Click Part (6) Kyaw Hein
Click Part (7) Kyaw Hein
Click Part (8) Kyaw Hein
Click Part (9) Kyaw Hein
Click Part (10) Kyaw Hein
Hugawng rawt malan poi du shang lawm
at 2/06/2010 08:36:00 AM
Mungkan mungdan shagu shanu nga ai jinghpaw wunpawng myusha ni yawng dai ni na ten hta tinang myusha nialawt lam ,ahkaw ahkangamatu shakut nga ai rawt malan poi hpe galaw nga ai ten ning htoi Mali kaja rai nga mali ai.
Malaysia Mung dan du nga Jinghpaw wunpawng myusha ni mung KNO hte KRC rau ta gin dun let galaw ai lamang hta shang lawm sai.Shiga hkum hkra gaw Kachin land ndai kaw hti yu ga.
Saw shaga da ai gaw grai law tim ndai mung dan masa ya ten rim ai lamamajaw Law malawng nlu sa ai lam chye lu ai.
Ngai hu gawng gaw laimat wa sai shaning 20ning janening rai rawt malan poi hpe htaw nam kahtawng shalawt da ai gaiwang ginra ni hta shang lawm lai wa sai.Ma prat ten na rawt malan poi ni hpe ya du naw dum shing ran ai.Grai mung myit rawt nngai.rai tim an hte tsun jahtau ai myu sha nialam hpe kadai mung na ya ai lam,chye chyang ya ai lam nau nnga ai.
Dai ni na ten gaw Prat galai sai.Mung kan ting hpe chye na hkra mai galaw sai rawt Malan poi ni de du sai.Myusha ni hpa majaw rawt malan ai.Hpa majaw lawt lu ra sai ngu hpe nang ngai wang lu wanglang mai tsun jahta sai.mungkan mungdan shagu myusha nialam dan leng lu hkra shaman ya ai Hpan Wa Karai hpe mung chye ju dum ai law.
USA kachin ni manau shadung baw kau ya ai majaw myen hpyen asu ya hpe ning hkap ai sumla hkrung
at 2/03/2010 07:31:00 PM
KDO ningbaw usa kamli hte Myutsaw shadang NK zau tawng ni hte Slg Gumsan ni woi awn ai hpe ndai zawn mulu nga ai,mung dan shagu du nga ai myutsaw shayi shadang sha niegaloi mung an hte myu htung hkring buga ,lamu ga ni kaw hkra wa yangazim sha nnga shalai kau ga law.Labau lit re ngu hkam la nna lam shagu hta shakut nga ga law.ya mung mali hka madip hte seng ai hpe mungkan ting chye na hkra ning hkap na lit nga mali ai nrai ni?
Hpamajaw sina mung dan ndai shara de nga mayu ma ta?hti yu ga
at 2/02/2010 05:53:00 PM
သူတို့ လူနေမှုထဲတွင် ဒို့လူတွေ ပျော်ဝင်ကြခြင်း
လူတွေ ပါးစပ်ဖျားမှာ အမေရိကား အမေရိကား ပြောနေကြတယ်၊ ဘာလို့လဲ? ဘာကြောင့်လဲ? ဘက်စုံကနေ ပျော်ဝင် ကြည့်ကြရအောင်၊ အခြေချ နေထိုင်သူတွေရဲ့ အကြီးမားဆုံး အမေရိကားရောက် အဓိက အိပ်မက်ဟာ အိမ်ပိုင်ဆိုင် ချင်တာပါပဲ၊ သူတို့ စံနစ် သူတို့ အဖြစ်သနစ်တွေမှာ မပျော်ဝင်တတ်ယင် အိမ်ခြေယာမဲ့ တောင် အရှင်လတ်လတ် ဖြစ်သွားနိုင်သေးတယ် မဟုတ်ပါလား၊ သူတို့ လူနေမှု စံနစ်ထဲမှာ စည်ကမ်းတကျ ဘောင်ဝင်အောင် နေထိုင်တတ်ယင် ဝင်ငွေနည်းလဲ အိမ်တောင် အလကားနီးပါး နေထိုင်ယင်း ပိုင်ဆိုင်နိုင်တယ် ပြောယင် လွန်တယ် ထင်မလား? ။
ကဲ လက်ရှိ အဖြစ်သနစ်တွေကို ဒူကဘာတို့ နေထိုင်တဲ့ ပြည်နယ်လေးကို စံပြုလို့ ပြောကြရအောင်၊ အမေရိကားရဲ့ ပြည်နယ်ပေါင်း ၅၀ဟာ သူတို့ မူ၊ သူတို့ ဥပဒေသတွေနဲ့ အုပ်ချုပ်ကြတော့ အချို့ဒေသတွေနဲ့ အနည်းငယ် လောက်တော့ ကွဲလွဲ တန်ကောင်းပါရဲ့၊ မြို့အကြီးကြီးတွေ မြို့လည် နေရာက ကလွဲလို့ အမေရိကားမှာ ပျှမ်းမျှ အိပ်ခန်း ၁ခန်းပါ (ဧည့်ခန်း၊ရေအိမ်၊မီးဖို တခန်းစီ အပါအဝင်) အိမ်ငှားခကို ဒေါ်လာ ၅၀၀ ကနေ ၈၀၀ လောက်အတွင်းမှာ အတိုးအဆုတ် ဆယ်ဂဏန်းလောက်နဲ့ ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ တလကို ရေဖိုး၊ မီးဖိုး အင်တာနက်၊ ဖုန်းဖိုးနဲ့ ၁ထောင်လောက် ပြေးနိုင်ပါတယ်။ နောက် အမေရိကားမှာ ဗဟိုအစိုးရက နေအိမ်အိပ်ခန်း ၁ခန်းကို လူ၂ယောက်နှုန်းသာ နေထိုင်ခွင့် သတ်မှတ်တာပါ၊ လိုက်နာရပါတယ် လိုက်နာသင့်ပါတယ် ဘာလို့လဲဆို အိမ်ပိုင်နဲ့ နေတဲ့လူတောင် ကိုယ့်ခြံထဲက မြက်ပင်ရှည်နေတာ မရိတ်မိလို့ ဘေးအိမ်က တိုင်ယင် ရုံးတက် လျှော်ကြေးပေး ဒဏ်ဆောင်ရတဲ့ နိုင်ငံကိုး။
အပေါ်ပုံက မြက်ခင်းစိမ်းနဲ့ အိမ်လေးကို သူတို့ မိသားစု နေကြမှာပါ
မြန်မာ့ လူ့အဖွဲ့အစည်း အခြေချ နေထိုင်သူတွေ များလာတဲ့ အမေရိကားက အခု အခြေအနေမှာ သူတို့ စံနစ်နဲ့ အံဝင်ပြီး အိမ်ပိုင် တလုံးရဖို့ကို နာရီ ၅၀၀ လောက် အလုပ်အားတဲ့ နေ့တွေမှာ လုပ်အားပေးလုပ်ပြီး သူ့တို့ဆီက ခွင့်ပြုချက် ရယင် အိမ်လခ ဒေါ်လာ ၈၀၀ ဝန်းကျင်လောက် ပေးကာနေရင်း၊ ၁၀နှစ်၊ ၁၅နှစ် လောက်အတွင်းမှာ အိမ်အသစ် စက်စက်ကြီး မပိုင်ဆိုင် ချင်ကြဖူးလားဗျာ၊ ပိုင်ဆိုင်သင့်တာပေါ့၊ ဟုတ်ဖူးလား။ ဆိုလိုချင်တာက အခုအဲဒီ အကြောင်း ပြောချင်လို့ပါ။
အမေရိကားဆိုတာ ဒါကြောင့် အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ နိုင်ငံလို့ ပြောကြတာပါ၊ အဓိက က လုပ်တတ်ကိုင်တတ် ဘောင်ဝင် တတ်ကြဖို့ပါပဲ၊ အချို့များဆို အံချော်နေလဲ အတင်းညှိပြီး ဘောင်ဝင်အောင် လုပ်တာလေးတွေလဲ ပြောပြပါ့မယ်၊ ဒီစီမံကိန်းကို Habitat ဆိုတဲ့ ခရိယာန် NGO ကနေ ဦးစီး လုပ်ကိုင်ပါတယ်၊ အခြား ပြည်နယ်တွေမှာလဲ အခြားအမည်တွေနဲ့ ဒီလို စီမံကိန်မျိုး ရှိပါတယ်၊ ဒီ ဟက်ဘီတက်ကို အမေရိကားမှာ ၁၉၇၆ ဝန်းကျင်လောက်က စတယ် ထင်ပါတယ်၊ အကြီးအကျယ် ဦးဆောင် လုပ်နေတာကတော့ အခုသမ္မတကို နောက်ဆုတ်ပြီး ရေတွက်ယင် ၄ယောက်မြောက် အယင် သမ္မတဟောင်း ဂျင်မီကာတာ နဲ့ သူ့ဇနီး ရို့စ်စလင်းကာတာ တို့ပါ၊ စီမံချက် ရည်ရွယ်ချက်က ကောင်းပါတယ် ဝင်ငွေ အလယ်အလတ် နည်းသူများ လူတန်းစေ့ ကိုယ်ပိုင်အိမ် ပိုင်ဆိုင်ရေးပါ၊ ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ဟာ ကုသိုလ်ဖြစ်ကနေ ကြီးထွားလာလို့ အမေရိကန် တနိုင်ငံထဲတင် မကတော့ပါဖူး တကမ္ဘာလုံးက နိုင်ငံ ၉၀မှာ အခုချိန်ဆို လူ၁.၅သန်း အတွက် အိမ်အလုံးရေ ၃သိန်းကျော် ဆောက်လုပ် ပြီးသွားပါပြီ၊ ကမ္ဘာကျော် နာဂစ်ကြီး ဖြစ်တော့ သူလဲ ဗမာပြည်ဝင်ပြီး ဧရာဝတီ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဖက်မှာ အိမ်တွေ ဆောက်လုပ်ပေးနေပါလို့ သိရပါတယ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံ ပို့တ်လင်းန်းမြို့မှာ ဆောက်ပေးတဲ့ Habitat ရဲ့ အိမ်နဲ့ လပွတ္တာနားက ချမ်းသာကုန်းက အိမ်
( ကွာခြားချက်က သိပ်မများပါဖူး၊ ရွာကတောင် အပင်တွေပိုများသေး )
အရင်းရှင် စံနစ်ဆိုတော့ နာမည်ကျော် ကုမ္မဏီကြီးတွေက နောက်ကွယ်ကနေ လူမှုရေး အကူညီပေးတယ် ဆိုပြီး နာမည်ကောင်း ယူကာ အခုလို နှစ်ကုန်လို့ အခွန်ရှင်းတမ်း လုပ်ကြတဲ့ အချိန်မှာ အခွန်ငွေ လျော့ပေါ့ရေး လျှော်ကြ ဖွတ်ကြတာတော့ ရှိတာပေါ့ ( အော် ဘာတွေ ပြောမိပါလိမ့် ) ၊ အမြတ်များတဲ့ ကုမ္မဏီကြီးတွေ အဲလို အလှူအတမ်းတွေ ထောက်ပံ့မှုတွေ လုပ်ယင် နှစ်ကုန်လို့ အခွန်ရှင်းတမ်းမှာ အခွန်ပြေကြောင်း ထည့်ရှင်းနိုင်တဲ့ ဂယ်ပေါက်တွေ ရှိလို့ ဒီလို အကျိုးအမြတ်မဲ့ ဒါနလုပ်ငန်း တွေမှာ နာမည်ကျော် ကုမ္မဏီတွေ တန်းစီ လှူဒါန်း လုပ်ကိုင်နေကြတာပေါ့၊ ဟက်ဘီတက်ရဲ့ အလှူရှင်စာရင်းမှာ အော်ရီဂန်က နိုက်ကီ ဖိနပ်တို့ အင်တဲယ်လ် မိုက္ခရိုချစ်(ပ်) တို့ တက်ထရောနစ်ခ် တို့နဲ့ ဘိုးရင်း လေယာဉ်ကုမ္မဏီ အပါအဝင်၊ ဆူပါ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းကြီးတွေလဲ စသဖြင့် ပါဝင်ကြပါတယ်။
ဒီလို အိမ်လေးတွေ ပိုင်ဆိုင်ဖို့ လိုအပ်ချက်တွေက ဒီဒေသမှာ အနည်းဆုံး ၂နှစ် နေထိုင်ပြီး ဝင်ငွေခွန် ၂နှစ် ထမ်းဆောင်ထားသူ ဖြစ်ရပါမယ်၊ ပြီးတော့ အလယ်အလတ် ဝင်ငွေနည်းပါးသူ ဖြစ်ရပါမယ်၊ ဒါကလဲ ယောကျာ်းအလုပ် လုပ်ယင် မိန်းမ မလုပ်နဲ့ပေါ့၊ လုပ်ယင်လဲ ဘောင်မဝင်တဲ့ နည်းနဲ့ လုပ်ခကို ငွေသားနဲ့ယူပေါ့၊ တချို့က ဒီလို ပရိုဂရမ် လျှောက်တော့မယ် ဆို၊ လင်မယား၂ယောက် ကွာရှင်း ထားလိုက်ကြတယ်၊ ဒီတော့ ဝင်ငွေနည်းသူက ခလေးတွေ ခလောက်တွေနဲ့ အိမ်လျှောက်တော့ သေခြာပေါက် ရရော၊ မိတော့ကော ကျမ ယောင်္ကျား မနေနိုင်လို့ လာနေတာ၊ ဒါကို ကျမကလဲ သာယာမိနေတယ်လို့ ပြန်ပြောယင် အစိုးရက လာဖမ်းလို့ ရတာမှ မဟုတ်တာ၊ မပိုင်ဖူးလား၊ ဖမ်းမယ် ပြောသူကိုတောင် ကျနော် ကျမတို့ အခွင့်အရေး နှောက်ယှက်ပါတယ်လို့ ဆိုယင် Abuse တောင် ဖြစ်သွားဦးမယ် မဟုတ်ဖူးလား၊ ဒီမိုကရေစီများ ပြောပါတယ်။ ဥပဒေပဲ လူလုပ်တာ ဂယ်ပေါက်တော့ ရှိမပေါ့ ဟုတ်လား။
နောက်ပြီးတော့ အိမ်လျှောက်တဲ့ လူရဲ့ Income (ဝင်ငွေ)ကို ချိန်ဖို့လိုပါတယ်၊ လစာကို ပေးစရာတွေ ဆပ်စရာတွေ ပေးပြီး အပြင် ငွေ ၂၀၀၊ ၃၀၀ လောက်ပိုကြောင်း ပြနိုင်ရပါမယ်၊ ဆိုလိုတာက ဒါလဲ သူတို့ အိမ်လခ ပေးနိုင်ဖို့ ပိုတယ်ဆိုတဲ့ သဘော သဘာဝပါ။ နောက်တခုက အမေရိကန် အဆင့်အတန်းလို့ ဆိုတဲ့ မိသားစု တစုမှာ ခလေး၂ယောက် ဒါမှမဟုတ် အဲဒီ အထက် ရှိရပါမယ်၊ (အိမ်နားက ပေါက်ဖေါ်ကြီးနဲ့များ ကွာပါ့) ခလေး ၁ယောက်ထဲရှိပြီး လင်မယား ၂ယောက်လုံး အလုပ် လုပ်ယင် ဒီပရိုဂရမ် လျှောက်လဲ ရဖို့ မသေခြာပါ။ ( ကွာရှင်း ထားယင်တော့ တမျိုးပေါ့ ) အခု နောက်ပိုင်း နယ်စပ်ဒေသက သူတွေ ရောက်လာကြတယ် သူတို့တွေက စစ်ပြေး ဒုက္ခသည်လို့သာ ဆိုတယ် ဘယ်လို စစ်ပြေးကြလဲ မသိဖူး ခလေးတွေ ကတော့ စိန်ဗေဒါ ဆိုင်းဝိုင်းက ကြေးမောင်းတွေလို အကြီးအငယ် အစီအရီကို လိုက်လို့၊ လမ်းများထွက်ရင် သားသမီးတွေ မှတ်မိနေရအောင် စစ်တပ်များ ကင်းစစ်သလို အမှတ်စဉ် မှတ်ရမဲ့ပုံ၊ ခြင်ကိုက်တိုင်း အိပ်နေကြလို့ပဲ ထင်ပါရဲ့၊ ထားပါလေ ဒီလို စိန်ဗေဒါရဲ့ ကြေးနောင်းလို လူတွေကတော့ ရဖို့ များပါတယ်။
ဒါက မီးဖိုချောင်ထဲ အဆင်သင့် တပ်ဆင်ထားတဲ့ ပစ္စည်းပစ္စယ တွေပါ
အိမ်လျှောက်ခွင့် ရပြီဆိုတာနဲ့ မိမိအလုပ် အားတဲ့ရက်မှာ မိသားစုဝင်ထဲက အရွယ်ရောက်သူ ဘယ်သူပဲ ဖြစ်ဖြစ် အဲဒီ ဟက်ဘီတက်ရဲ့ အိမ်ယာ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာ နာရီ ၅၀၀ ပြည့်အောင် အခမဲ့ လုပ်အားပေး လုပ်ရပါတယ်၊ ( အခမဲ့ ဆိုလို့ ခေါက်ရိုးကျိုးပြီး အဓမ္မလုပ်အားပေးလို့ မထင်ကြပါနဲ့ အိမ် အသစ်ရမှာပါ ) အဲလို လုပ်ငန်းခွင်မှာ လုပ်ယင်း သူတို့က ခင်ဗျားတို့ မိသားစုကို အိမ်တလုံး ထိမ်းသိမ်းနည်းကို သင်သွား ပေးတာပါ၊ ဒီလို အလှည့်ကျ စံနစ်နဲ့ ခင်ဗျားအိမ်ကို ဘယ်နေရာ ဘယ်လမ်းမှာ ရပြီဆိုပြီး ပြောပါမယ်၊ သွားကြည့်ပါ နေရာ မကြိုက်ယင် ငြင်းပိုင်ခွင့် ၂ခေါက် ရှိပါတယ်၊ အိမ်အနေအထား အခန်းဖွဲ့စည်းပုံ ကတော့ လူဦးရေအပေါ် မူတည်ပြီး ရပါတယ်၊ ရေချိုးခန်း အပါအဝင် Master bedroom၊ ဥပမာ … ကလေးက ယောက်ျားလေး ၁ဦး၊ မိန်းခလေး ၁ဦးဆိုယင် အိပ်ခန်း ၃ခန်းနဲ့ အိမ်ကိုရပါမယ်၊ သားသမီးက ယောက်ျား လေး၂ဦး၊ မိန်ခလေး ၂ဦး ဆိုယင်တော့ တွဲပြီး အိပ်ခန်း ၂ခန်းပဲ ပေးပါတယ်၊ ဒါကလဲ ဒို့ ရွှေတွေ အတွက် အခက်အခဲ မရှိပါဖူး ညှိယူ မရယင် ငိုပြကြတော့ ၁ယောက် ၁ခန်း စီရကြတာပါပဲ။ နောက် အရေးကြီးတာက အိမ်လျှောက်ခွင့် ရပြီဆိုတဲ့ အချိန် မိသားစုဝင်တွေရဲ့ ကျန်းမာရေး အခြေအနေ အသေးစိတ် ဖွင့်ပြောပြတော့ အိမ်ဆောက်တဲ့ သူက အဲဒီမိသားစုဝင်တွေရဲ့ ကျန်းမာရေးပါ တွက်ချက်ပြီး စဉ်းစား ဆောက်ပေးကြပါတယ်။
ကဲ အိမ်ရပြီ ဆိုပါတော့ ဒီအိမ်ကို များသောအားဖြင့် ဒေါ်လာ ၁သိန်းခွဲနဲ့ ၂သိန်း တန်ကြေး လောက်ရှိမဲ့ အနေအထားမျိုး ဆောက်လုပ် ပေးပါတယ်၊ လေပူ၊ လေအေး၊ ရေခဲသေတ္တာ၊ အဝတ်လျှော်စက်၊ ကော်ဇော ခင်းထား ပေးပြီး၊ လူအသင့် တက်နေနိုင်အောင် စီမံ ထားပေးပါတယ်၊ အိမ်အတွင်း ဆေးသုတ်ထားတဲ့ ကာလာက အစ မိမိမြတ်နိုးတဲ့ အရောင်ကိုပဲ သူတို့ သုတ်ပေးတာပါ။ တောင်းဆိုလို့ ရပါတယ်၊ ဒီအိမ်ကို အိမ်ရမဲ့သူတွေ ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္မဏီတွေ၊ အခြားသော ဗော်လံတီယာ ဝန်ထမ်းတွေ၊ တက္ကသိုလ်တက်ဖို့ လုပ်ငန်း ခရက်ဒစ်ယူဖို့ အထက်တန်း ကျောင်းသူ/ ကျောင်းသားတွေ ဝိုင်းပြီး တတ်ကျွမ်းတဲ့ အင်ဂျင်နီယာတွေ စီမံမှုအောက်မှာ ဆောက်လုပ်ကြပါတယ်၊ အိမ်ရလို့ နေယင် အိမ်ငှါးနေစဉ် ကလိုပဲ အိမ်လခ ၅၀၀ ကျော် ရေဖိုး၊ မီးဖို၊ အမှိုက်ပစ်ခ၊ တွေနဲ့ ဒေါ်လာ ၈၀၀ လောက် ပုံမှန်ပေးသွားပြီး ၁၅နှစ် အကြာမှာ အိမ်ပိုင်ပါတယ်၊ ၁၀နှစ်အကြာမှာ အရောင်းအဝယ် လုပ်နိုင်ပါပြီ၊ ရောင်းစရာ နေရာမသိလဲ အဲဒီ ဆောက်ပေးတဲ့ ဟက်ဘီတက်ကို ပြန်ရောင်းလဲ ရပါတယ်။
အခု ပြန်ကြားရတဲ့ အချက်တခုက အိမ်လခ ၈၀၀ ကျော်လောက် များလွန်းလို့ မပေးနိုင်ဖူး ဆိုယင်လဲ အိမ်ဝယ် စာချုပ် သက်တမ်း ၁၅နှစ်ကို ဆွဲဆန့်ပြီး အနှစ်၃၀ လုပ်ပြီး အိမ်လခ ၃၀၀ ကျော် ၄၀၀ လောက်လုပ်လို့ ရပါတယ်၊ အလုပ် မရှိယင်လဲ ရှိတော့မှ ပေးမယ်လို့ ခံဝန်ကတိ နဲ့ လုပ်ယူလို့ ရပါတယ်၊ ဒါမှ မတတ်နိုင်လဲ အလကား ယူလို့တော့ ဟက်ဘီတက်က ကြေညာတာတော့ မတွေ့ရ သေးကြောင်းပါ …။ ကဲ အထက်မှာ ရေးခဲ့သလိုပဲ၊ အလကားပဲတင်း နီးပါးလောက် လျော့ပေးပြီး အိမ်မရှိသူ အိမ်ပိုင်ဆိုင်ရေး လုပ်နေတဲ့ အမေရိကန်တွေ လူနေမှု စံနစ်တခုဟာ စိတ်ဝင်စား စရာပါ။ ဟက်ဘီတက် အလယ် အလတ်တန်းစား လူနေမှု စံနစ်ရဲ့ အိမ်ယာတွေဟာ ဒူကဘာ တွေ့ဖူး သလောက်တော့ အခြား ပြည်နယ်တွေမှာ လုံးချင်းအိမ်တွေ တွေ့ရပြီး၊ များသော အားဖြင့် ဂျူ့ပလက် လို့ခေါ်တဲ့ ၂လုံးတွဲ အိမ်ယာတွေ များပါတယ်။
အဲဒီဘေး ခြံလေးကိုတော့ တမူ ထူးခြားစွာ အမျိုးသမီးတွေ နေဖို့အတွက် အမျိုးသမီးတွေသာ ဆောက်လုပ် နေကြတာပါ
( ခြံဝန်းထဲ အမျိုးသား ဝင်လို့မရပါ ဆိုပါတယ် အံ့ရော...အံ့ရော )
မနေ့ကမှ အိမ်ရသွားတဲ့ မိတ်ဆွေ တယောက်ကတော့ အိပ်ခန်း ၃ခန်း သူ့အိမ်ကို ကာလတန်ဖိုး ဒေါ်လာ ၁သိန်းခွဲ ကျော်ယုံလေး သတ်မှတ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်၊ နောက်တော့ သူက အခမဲ့ လုပ်အားပေး နာရီ၅၀၀ ကျော် လုပ်အားပေးထားပြီး ပိုလုပ်ထားတဲ့ သူ့နာရီတွေကို သူများတွေအတွက် ပြန်လှူဒါန်းတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီအိမ် အရောင်းအဝယ် စာချုပ်တော့ သူ့ကိုယ်ပိုင်ငွေ ဒေါ်လာ ၁၅၀၀ Down Payment ချပေးတော့ ဟက်ဘီတက်က ဒေါ်လာ ၄ထောင်ကျော် လျော်ပစ်ပြီး၊ ပြည်နယ်အစိုးရက ဒီနှစ်အခွန်ကောက်တာ ပိုငွေပြနေလား မသိ၊ ဒေါ်လာ ၄သောင်း ၆ထောင်ကျော် စိုက်ပေးရာမှာ သူရဲ့ ကာလတန်ဖိုး ၁သိန်းခွဲတန် အိမ်ကြီးကို သူက ဒေါ်လာ ၁သိန်းပဲ ပေးရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်၊ ဒါကလဲ ၁၅နှစ်အတွင်း နေထိုင်ပြီး၊ အပြီးချေသွားမှ ၁သိန်းပဲ ပေးရမှာပါ၊ ရောင်းလို့ ရတဲ့ ၁၀နှစ်အချိန်မှာ ရောင်းထုတ်ခဲ့ယင် (ငွေအကြေ ချေနိုင်ယင်တော့ ၁သိန်းပါ၊ မချေနိုင်ပဲ ရောင်းထုတ်ခဲ့ယင်လို့ ဆိုလိုတာပါ) အဲဒီ အဖွဲ့အစည်းတွေ စိုက်ထားပေးတဲ့ ငွေတွေကို ထုတ်နှုတ်ပြန်ချေ ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အိမ်အတွင်းမှာတော့ ခေတ်နဲ့လျောညီတဲ့ စံနစ်တွေနဲ့ တည်ဆောက်ထားပြီး၊ အေးတဲ့ အချိန်များတဲ့ နိုင်ငံဆိုတော့ အပူပေးစက်တောင် အရင်က အသားများ ကြပ်တိုက်သလို Direct Heater စံနစ်နဲ့ မဟုတ်ပဲ High efficiency water humidity စံနစ်တွေနဲ့ ပြုလုပ်ထားလို့ အပူကို ရေငွေ့နဲ့ပေးပြီး လေဝင်လေထွက် ကောင်းမွန်လို့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်ကြောင်း ပြောပြ သွားပါတယ်။ကောင်းတာက ဒီပရိုဂရမ်ဟာ Nothing get free anywhere ! လို့ ဆိုတဲ့ အမေရိကားမှာ အတိုးမရှိတဲ့ ငွေချေနှုန်းနဲ့ အိမ်သစ်တလုံး တက်နေရင်း အပိုင်ရ သွားတာပါပဲ။
ဒီလို အလယ် အလတ်တန်းစား ဝင်ငွေရှိတဲ့ မိသားစုတွေရဲ့ အိမ်ယာ စီမံကိန်းကို ဒူကဘာတို့ မြို့လေးမှာ ရလို့ နေထိုင်သူတွေ ၇ဦး/၈ဦး ရှိနေကြပါပြီ၊ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အမေရိကားမှာ ချမ်းသာလို့ပဲ ဝယ်ဝယ်၊ ငွေရှာနိုင်လို့ပဲ ဝယ်ဝယ်၊ အကြွေးပေးနိုင်လို့ပဲ ဝယ်ဝယ်၊ ဝယ်ချင်သလို ဝယ် အိမ်တဆောင်မီး တပြောင်တော့ ဖြစ်သွားတာပေါ့ မဟုတ်ဖူးလား၊ သူများ အတွေ့အကြုံ မြင်သလောက် ရေးရတာ ဆိုတော့ ဒီလောက်ဆို ဒူကဘာကြီး တယောက် ပျောက်ချက်သား ကောင်းနေတာကို ကြေနပ်ကြမယ် မျှော်လင့်ပါတယ်၊ နောက်ထပ် အတွေ့ကြုံ ကောင်းတွေကို မတူညီတဲ့ ရှုထောင့်တွေနဲ့ ရေးပါဦးမယ်။
ndai kaw na re.http://chittemanawmyae.blogspot.com/
U Thant’s concept of “One World,”
at 2/02/2010 12:10:00 PM
Ban Praises U Thant for Leadership Skills
By LALIT K. JHA Tuesday, February 2, 2010
UN Secretary-General Ban Ki-moon on Monday praised U Thant, the third secretary-general of the United Nations, for steering the world body safely throughadecade of change.
“Asadiplomat, U Thant showed great skill and quiet persistence. He steered the United Nations safely throughadecade of change, and playedakey role in defusing the Cuban missile crisis and ending the civil war in the Congo,” Ban said inamessage to an event held in New Delhi marking the centenary of the birth of the Burmese leader.
U Thant recordsaUN Day message at UN headquarters in New York, October 12, 1971. (Photo: UN/Saw Lwin)
“He was an integral part of efforts to create many of the institutions which work to alleviate poverty and advance human development, including the UN Development Programme and the UN Conference on Trade and Development,” Ban said.
“It isasad irony that his vision of human development has not yet been realized in his own country,” said the secretary-general, who despite his best efforts has not been able to influence the Burmese junta to restore democracy and protect the human rights of its people.
The second UN secretary-general from Asia after U Thant, Ban said: “I draw inspiration from many of those who have occupied the position I now hold, but U Thant hasaspecial place in our thoughts. His work on sustainable development laid the foundations for our efforts today to combat climate change and safeguard the global environment.”
U Thant’s concept of “One World,” which he articulated at the height of the Cold War, was an early recognition of the global interdependence that is today so prominent in all our lives, Ban said.
“I have also been moved by his description of the world as 'our beautiful spaceship with its warm and fragile cargo of animate life,'” he said.
Ban said U Thant's values of global solidarity and his belief that the UN must always focus on the dignity and well-being of the individual, remain central to the work of the United Nations.
jinghpaw wunpawng myusha ni zahpawng hpawng nga ma ai da
at 2/01/2010 07:21:00 PM
yaten Malaysia du jinghpaw wunpawng myusha ni gaw Zahpawng hpe lang hte lang hpawng bawng ban nga ai lam chye lu ai.
dai ning na ten ladaw hta mugun sa wa na ningbaw ning la hte Gawda tara grau kaja hkra gram lajang na lam,ningbaw lata zuphpawng hte seng ai lam,mungdan kataenga yang na shim lam lam shagu hpe bawng ban nga ai lam chye lu ai.
shiga hkum hkra gaw KRC niashaning shagu na hpawng ngut ai hpang chye lu na lam tsun ma ai,ya ten hta hpa shi ga mung nmai shapoi ai lam mung chye lu ai.
BBC shiga : Burma's Kachin army prepares for civil...
Who is first KDO-KRC founder?Who is first KDO-KRC ...
Malaysia mungdan Kuala Lumpur mare kaw "Taxi" jawn...
Hugawng Grai ra ai Myen mungasumla hkrung ning h...
USA kachin ni manau shadung baw kau ya ai majaw my...
Hpamajaw sina mung dan ndai shara de nga mayu ma t...
jinghpaw wunpawng myusha ni zahpawng hpawng nga ma...